अपुरो विमर्श- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २५, २०७६ निशान्त खनाल
यतिखेर सार्वजनिक पदको उपल्लो तहबाट सेवानिवृत्त भैसकेका पूर्वप्रशासकहरू माझ आफ्नो सेवा अवधिका अनुभव समेटेर पुस्तक लेख्ने लहर नै चलेको छ  । यसै क्रममा पूर्वअर्थसचिव र प्रमुख महालेखा परीक्षकसमेत भइसकेका भानुप्रसाद आचार्यले ‘नेपालमा उदारवाद, प्रयोग र परिणाम’ नामक पुस्तक लेखेका छन्  ।
आचार्यको यो पुस्तक आत्मकथा नभएर एक प्रशासकको अनुभव र सैद्धान्तिक ज्ञानको दस्तावेज हो ।
शीर्षकमा भनिएजस्तो नेपालमा उदारवादी नीतिको प्रयोग र त्यसका परिणाम मात्रै नभएर यो पुस्तकले उदारवादका सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठान गरेको छ । लेखकले हरेक अध्यायको सुरुआतमा त्यसका सैद्धान्तिक अवधारण, प्रणेता र इतिहासका बारे पनि चर्चा गरेका छन् । यद्यपि उदारवादी नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा भएका परिवर्तन, त्यसले ल्याएको परिणाम र नीति अवलम्बन गर्दाका व्यावहारिक र नीतिगत कठिनाइहरूबारे पुस्तकमा पढ्न पाइँदैन । यो पुस्तक सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव र लेखकीय दुविधामा नराम्रोसँग जेलिएको छ । ४ सय ६९ पृष्ठको पुस्तक पढ्दै गर्दा लेखकले भन्न खोजेका कुराहरू कनिका टिपे जसरी पाठकले आफैं टिप्नुपर्ने हुन्छ । पुस्तकको चुरो, नेपालमा उदारवाद र यसका प्रयोगलगायतका विषयहरू अपूर्ण तरिकाले पुस्तकभर यत्रतत्र छरिएका छन् ।
नेपालमा उदारवाद आवश्यक थियो अथवा थिएन, यसको सुरुआत प्रस्थानविन्दु के थियो र कस्ता कस्ता नीतिगत निर्णय र राजनीतिक व्यवस्थाले उदारवादतर्फको यात्रामा कस्तो प्रभाव पारे भन्नेलगायतका विषयमा समयरेखासहितको विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने अवसर र स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसो गर्न पुस्तक चुकेको छ । यसो हुनुमा पुस्तक सम्पादन र यसको खाका निर्माण गर्दै गर्दा पर्याप्त समय नदिनु हो । नेपालमा उदारवादको सुरुआत प्रस्थानविन्दु २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मानिन्छ । विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म नेपालले सीमित रूपमा उदारवाद अभ्यास गर्ने मौका प्राप्त गर्‍यो, त्यसैताका मुलुकले लिएको निजीकरण र उदारवादको नीति नै हालको सञ्चार, शिक्षा, यातायात, बैंकिङलगायतका क्षेत्रहरूमा भएको परिवर्तनको सुरुआत थियो । तर नेपालले त्यसै समयमा गरेको औद्योगिक निजीकरण, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल किन गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ यस पुस्तकमा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
उदार अर्थनीति भन्नु प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई उजागर गर्नु र सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने उचित अवसर दिनु हो, यसमा सरकारको भूमिका निष्पक्ष रहेर उचित वातावरण सिर्जना गर्नु हुन आउँछ, के नेपालको सरकार र राज्य प्रणालीले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो ? अथवा के कस्ता अर्थराजनीतिक कारणले उदारवाद सीमिततामै सीमित हुन आयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर पुस्तकमा खासै पाइँदैन । बरु लेखकले पृथ्वीनारायणदेखि चन्द्रशमशेरसम्मको इतिहास र श्रीलंकाको गृहयुद्धसम्मका प्रसंगहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । आठ खण्डमा विभाजित यस पुस्तकको पहिलो खण्ड अर्थराजनीतिको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र नेपालको परिवेशमा लेखकले यथेष्ट पृष्ठभूमि तयार पारेका छन् । अर्थराजनीतिकै एक प्रसंगमा लेखक भन्छन्, ‘अर्थराजनीतिक निर्णयले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सघाउ पुर्‍याउने र बाह्य क्षेत्रमा निकासी वृद्धिको कार्यक्रम जरुरी देखिन्छ ।’ तर आर्थिक प्रशासनको उच्च तहमा लामो समय बसेका लेखकले के कस्ता कार्यक्रम, कस्ता कस्ता नीतिगत निर्यणहरू र तिनीहरूको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही लेखेका छैनन् । खुला तथा उदार आर्थिक नीति अवलम्बनको समीक्षा गर्दै गर्दा लेखकले नेपालका नीतिगत निर्णय र तिनका परिणामको समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । लेखकले यसमा पनि मुख्य विषयवस्तुलाई जनआन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन, माओवादी आन्दोलनलगायतका विषयसँग बिनाप्रसंग जोडेका छन् । जसले गर्दा मुख्य विषयवस्तु एकातिर हराएको छ भने पुस्तकको आकार बढेको छ । अर्थराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने विश्लेषणमा राजनीति हावी भएको छ । राजनीतिक दल त्यसभित्रका सिन्डिकेट, राष्ट्रिय पहिचानलगायतका विषयहरू नेपालको उदारवाद समीक्षा गर्दा पढिनु र मनन गरिनुपर्ने कुराहरू हुन् । तर पुस्तकमा यी उपशीर्षकमा मात्र सीमित रहेका छन, मूल विषयसँगको यिनको सम्बन्ध खासै देखाइएको छैन ।
आर्थिक उदारीकरण र उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र नामक दोस्रो खण्ड यस पुस्तकको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो । लेखकले सम्पूर्ण पुस्तकमा भन्न खोजेका विषयगत अवधारणा र उदारवादतर्फको नेपालको यात्रा त्यसका विभिन्न मोडहरू यसै खण्डमा लुकेर रहेका छन्, जसमा लेखकले अन्तरदेशीय वार्ता गर्दाका अनुभव विभिन्न नीति, सन्धिहरू तथा तिनको उपयोगिताका बारेमा चर्चा गरेका छन् । यो खण्डलाई अझ विस्तृत रूपमा तयार पारी सम्पादन गरेको भए पुस्तकका अन्य खण्ड त्यति आवश्यक पर्ने थिएनन् । पुस्तकको तेस्रो खण्ड सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित छ, जसमा लेखकले संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन र त्यसको कार्यान्वयनसम्मका विषय खाँदेका छन् । यस विषयमा अर्को पुस्तक नै लेखिन सक्थ्यो । अर्थ प्रशासन शीर्षक राखिएको यस खण्डमा लेखकले काम गरेका अर्थमन्त्रीहरूले के कस्ता बजेट प्रस्तुत गरे भन्नेबाहेक अर्थ प्रशासन र यसका क्रियाकलाप, चुनौती अवसर र सुधार गरिनु पर्ने विषयहरूका बारे लेखेक बोल्दैनन् । अर्थसचिव भैसकेको व्यक्ति यस्ता विषयमा समीक्षात्मक हुनुपर्ने थियो पुस्तक पढ्दै गर्दा त्यो अनुभव हुँदैन ।
नेपालको राज्यप्रणालीमा वैदेशिक सहयोग अनुदान र ऋणको महत्त्व र प्रभाव अत्यन्तै धेरै भैसकेको छ, बजेटको ठूलो हिस्सा यसैमा निर्भर छ । यसर्थमा पुस्तकको चौथो खण्ड वैदेशिक सहयोगको अर्थराजनीति नेपालको अर्थव्यवस्था बुझ्न निकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर, लेखकले विस्तृत व्याख्या नगरी अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा यो अध्याय पनि अपुरो भएको छ । यद्यपि नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन लागेको सन् १९५० को दशकदेखि हालसम्म आइसक्दा के कस्ता परिणाम देखिए र कस्तो अर्थराजनीतिक निर्णय र स्वार्थहरू उजागर भए भन्नेमा लेखकले केही हदसम्म खुलेर आफ्ना कुरा भन्न सकेका छन् ।
खण्ड पाँच र छमा चर्चा गरिएको सार्वजनिक वित्त र जवाफदेहिता तथा महालेखापरीक्षक नामक अध्यायहरू लेखकले पाठकलाई दिएको बोनस ज्ञान मात्रै हो । पुस्तकको शीर्षकसँग यी कहीँ कतै पनि जोडिन आउँदैनन् र यी दुई अध्यायबिना पनि पुस्तक अपुरो रहँदैन ।
खण्ड सातमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यस खण्डले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता बुझाउन केही हदसम्म सहयोग गर्छ ।
‘अबको गन्तव्य’ नामक अन्तिम अध्यायमा लेखकले नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने आठ बुँदागत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा लागू भैसकेका वा हुन नसकेका र प्रभावकारी नदेखिएका यी सुझावहरूमा खासै नयाँ विषय केही पनि छैनन् । यस अध्यायमा लेखकले
आफ्ना सुझावलाई प्रमाण र अनुभवसहितका आधारमा प्रस्तुत गरेको भए प्रभवकारी हुने थियो ।
आफूलाई थाहा भएका सबै जानकारी एकै मेखमा पाठकलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको सिकार यो पुस्तक भएको छ । यसमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सामग्री हेर्दा लेखकको फराकिलो अध्ययनको दयारा लोभलाग्दो देखिन्छ । नेपालको उदारवादी व्यवस्थाको चर्चा गर्न लेखकले यस पुस्तकमा उठाएका विषय यथेष्ट छन् तर ती संगठित छैनन् । अति नै महत्त्वपूर्णा विषयहरू रहँदारहँदै पनि यो पुस्तक अनुभव, सिद्धान्त र प्रस्तुतिमा बीच जेलिएको गन्थनजस्तो मात्रै भएको छ ।
समाजवादउन्मुख नेपालको अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा उदारवादी नीतिले दिएको योगदान र यसबाट राज्यले लिन सक्ने फाइदहरूलगायतका विषयमा पुस्तक गतिलो सन्दर्भ स्रोत हुन सक्छ ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:१३
एक फिल्म विद्यार्थीको रोजाइका फिल्म
आश्विन २५, २०७६ किरण विक
आजको दिनमा फिल्मका दर्शक बढ्दै गइरहेका छन्  । फिल्मले मनोरञ्जक र बौद्धिक साधनका रूपमा स्वीकार्यता पाइसकेको छ  ।
बिस्तारै यसले किताबका कीराहरूमाझ पनि ज्ञानको स्रोतको रूपमा स्पेस पाउन थालेको छ । नेपालमा पनि फिल्मलार्ई मनोरञ्जन र बौद्धिक कर्म मान्ने जमात छ । मनोरञ्जन मान्नेहरू फिल्मलाई ‘कमर्सियल प्रोडक्ट’ भन्छन् भने बौद्धिक कर्म मान्नेहरू फिल्मलाई ‘आर्ट’ भन्छन् । मेरो आफ्नो मतचाहिँ फिल्म ‘कमर्सियल प्रोडक्ट’ नै हो जसको कलात्मक मूल्य छ भन्ने हो ।
सिनेमाप्रेमी नेपालीहरूले विश्वबजारमा चर्चा कमाएका फिल्महरू सम्भव भए हलमै गएर नभए अन्य वैकल्पिक उपायबाट पनि हेर्न थालेका छन् । म पनि फिल्मको औपचारिक विद्यार्थी हुनाले र फिल्म मेकिङमा भविष्य खोजिरहेको हुनाले सम्भव भएसम्म धेरै फिल्म हेर्ने गर्छु । नेपालमा कलात्मक समीक्षाको दृष्टिले अब्बल मानिएका फिल्महरू बारे प्रशस्तै चर्चा परिचर्चा गरिएको सुनेको/देखेको तर व्यवसायिक फिल्मबारे कम चर्चा गरेको सुनेको/देखेको हुनाले कतै नेपाली दर्शकले राम्रा ‘कमर्सियल’ फिल्म हेर्न त छुटाएनन् भन्ने जिज्ञासा मेरो मनमा पलाइरह्यो । फलस्वरूप यो लेख लेख्न पुगें । यसमा ज्यादातर व्यावसायिक फिल्म छन् । यो लेख विश्व बजारमा चर्चित केही फिल्महरूको सामान्य परिचयात्मक विवरण मात्र हो र फिल्मप्रेमी दर्शकहरूलाई हेर्नका लागि सुझाव पनि हो ।
एगोरा : यो फिल्म हाइपासिया नामकी चौथो शताब्दीकी गणितिज्ञ तथा एस्ट्रोनोमीस्ट महिलाको बारेमा हो जसले उति बेलै सूर्य पृथ्वीको वरिपरि होइन, पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ भन्ने तथ्य पेस गरेकी थिइन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । धर्म (समाज) विज्ञानबीचको घर्षणले उत्पन्न गराएको युद्धका कारण एगोराको आफ्नै विद्यार्थीद्वारा हत्या हुन्छ । उनले पेस गरेको तथ्य १२०० वर्षपछि १७ औं शताब्दीमा फेरि वैज्ञानिक जोहान्स केप्लरले प्रमाणित गरे ।
ओमकारा : विशाल भारद्वाजले निर्देशन गरेको ‘ओमकारा’ सेक्सपियरको नाटक ‘ओथेलो’बाट प्रभावित भएको हो । तर, मेरो आफ्नो अनुभवमा राजा भर्तृहरिको कथा, महाभारतका धृतराष्ट्रको कथा र ओथेलो कथा गरी यो तीनवटा कथाको मिश्रण हो । यसका पटकथाकार रोबिन भट्टलाई उक्त फिल्मको कथाबारे मैले त तीनवटा कथाको मिश्रण देख्छु नि भन्दा त्यस्तो हुन सक्छ तर मलाई थाहा छैन भन्ने उत्तर दिएका थिए । मलाई यो फिल्म नेपालमै रोबिन भट्टसँगै बसेर हेर्ने मौका मिलेको थियो ।
द इल्युजनिस्ट : सानोतिनो चटक गर्ने एक गरिब केटाको प्रेम त्यसै गाउँको धनाढ्यकी छोरीसँग बस्छ । केटीको परिवारले गरिबको संगत थाहा पाएपछि छुट्टाउँछन् । केटा त्यो ठाउँ छोडेर जान्छ भने केटीको एक युवराजसँग बिहे हुन्छ । केटो केही समयपछि ठूलो जादुगर भएर सहर फर्किन्छ । मरेको आत्मा बोलाउन पनि सक्छ । आफ्नो कलाजादुको नक्कली प्रयोगबाट उसले आफ्नी प्रेमिका फिर्ता पाउँछ । मैले अंग्रेजी फिल्म हेर्न सुरु गरेको यो दोस्रो फिल्म भएकाले यसको प्रभाव ममा निकै परेको छ ।
परफ्युम : एकदमै फोहोरमा हुर्केको बढेको बालकले वासना परैबाट थाहा पाउने गुण पाएको हुन्छ । सधैं फोहोरमा हुर्केको उसलार्ई एक दिन युवतीको सुगन्ध मन पर्छ । संसारकै सबैभन्दा सुगन्धित युवतीको खोजी र युवतीको शरीरको वासना जम्मा गर्ने लोभले ऊ अनेक महिलाको हत्या गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छ ।
रेड स्प्यारो : सस्पेन्स रुचाउनेहरूलाई यो फिल्म रोचक हुन सक्छ । रसिया र अमेरिकाबीच शीतयुद्धकालमा युवती प्रयोग गरेर पनि जासुसी भयो । फिक्सनल भए पनि यो फिल्म सत्यतथ्यबाट प्रेरित छ ।
टु किल अ मकिङबर्ड : यो फिल्म हार्पर लिको १९६० मा प्रकाशित यसै नामको चर्चित उपन्यासमा आधारित छ । एउटा गोरो वकिलले कालो अभियुक्तको केस लडिरहेको छ । उसका एक सानो छोरा र एक सानी छोरी यस्तो काला र गोराको अन्याय हेर्दै बुबालाई प्रश्न गर्दै हुर्किरहेका छन् । यसकै वरिपरि फिल्म छ ।
आनोन : यो साइफाई जनराको फिल्म हो । हलिउडमा साइफाई जनरा विकसित र सफल मानिन्छ । पछिल्ला सबै हेरिएका साइफाईमध्ये यो मन परेको फिल्म हो । यसमा यस्तो संसार छ जहाँ सरकारी अधिकारीहरूले आँखाबाटै स्क्यान गरेर निगरानी गर्न सक्छन् ।
क्यापरनम : यो लेवनानी फिल्म हो । लेवनानको अशिक्षित गरिब सुकुम्बासी बस्तीमा धेरै बच्चाबच्ची हुने एक युवकले बाँच्नका लागि गरेको संघर्षको कथा हो । सन् २०१८ को यो फिल्म टोरेन्टबाट धेरै डाउनलोड हुनेमा पर्छ । नदाइन लवाकीले यही फिल्मबाट क्यान्समा जुरी अवार्ड पाएकी थिइन् ।
द डिपार्टेड : म्यासाचुसेट्स राज्य प्रहरीभित्रको अपारदर्शी क्रियाकलाप र यसका अन्डरकभर एक्सन र अन्डरकभर एजेन्टबीचको मिलेमतो र धोकाधढी बारेको यो फिल्म धेरै नै डरलाग्दो छ । यसमा चर्चित दुई हलिउड हिरो मेट डेमन र लियोनार्डो डिक्याप्रियोले एक अर्काको काउन्टरको भूमिका खेलका छन् ।
कर्स अफ द गोल्डेन फ्लावर : यो प्राचीनकालको चिनियाँ सम्राट्को दरबारभित्रको महत्त्वाकांक्षा जालसाजी षड्यन्त्र र अनैतिक सम्बन्ध आदिबारेको गठजोड हो । यो फिल्म हेर्दा म धेरैपटक तर्सिएको थिएँ, यद्यपि यो भूतको फिल्म होइन । चीनका अहिलेसम्मकै सफल निर्देशक मानिने च्याङ यिमाउले यसको निर्देशन गरेका हुन् ।
ब्ल्याकमास : यो अमेरिकी डकैत जेम्स ह्वाइटिको जीवनीलगायत अन्य डकैतीको घटनाको जोडजाड हो । कन्टेन्टभन्दा पनि यो फिल्मको मेकिङ स्टाइल मन परेको हो ।
डिटेक्टिभ डी : हिन्दी र अंग्रेजी जासुसी फिल्म हेर्नेहरूलाई पनि यो मोनोटोनस ब्रेक गर्ने फिल्म बन्न सक्छ । यस फिल्मका तीनवटै भाग हेर्न मेरो सुझाव छ । विशाल साम्राज्यको महारानीलाई मार्न एउटा मजदुरले कस्तासम्म योजना बनाउँछ हेर्न मजा आउँछ ।
ब्याटम्यान : यो सिरिजका तीनवटै फिल्म हेर्नुपर्छ । क्रिस्टोफर नोलानको निर्देशन बेजोड छ । ब्याटम्यानमा हिरोले कुनै जादू गर्दैन ।
अ डेन्जरस मेथड : फ्रायड र उनको साथी कार्ल जंगले जीवनमा सविना नाम गरेकी एक मानसिक बिरामी महिलामाथि विभिन्न प्रयोग र अन्तरंग गरे । यो फिल्म त्यसकै बारेमा हो ।
एक रुका हुआ फैसला : यो फिल्म ‘ट्वेल्भ एङ्ग्री म्यान’को हिन्दी अनुवाद हो । फिल्म मेकिङका विद्यार्थीलाई डायलग प्रोजेक्टअन्तर्गत यसलाई अनिवार्य रूपमा हेर्न भनिन्छ । मलाई यो अंग्रेजीभन्दा हिन्दी भाषामा हेर्दा मजा लाग्यो ।
द प्रेस्टिज : बलिउडको ‘धुम थ्री’ यसबाटै प्रेरित थियो । दुई जादुगर जुम्ल्याहा दाजु भाइको अर्को प्रतिस्पर्धी जादुगरसँगको लडाइँ नै मुख्य कथा हो ।
ट्रान्सपोर्टर : जेसन स्टेथामलाई त हलिउडको सलमान खान भने पनि हुन्छ । उसो त सलमान खान नै स्टेथामबाट निकै प्रभावित भएजस्तो देखिन्छ । जेसनका फिल्म औसत कथाको हुने भए पनि मेकिङका हिसाबले हेर्न सधैं रमाइलो लाग्छ ।
ग्रिनमाइल : यो फिल्म मृत्युदण्ड सुनाइएकाहरूलार्ई करेन्ट लगाएर दिइने मृत्युदण्ड र एउटा जेलको कुरुवा प्रहरी जो पिसाबको बिरामी हुन्छ, काबीचको हो ।
पाइरेट्स अफ द क्यारेबियन : क्याप्टेन ज्याक स्प्यारो मलाई एकदम मन परेको पात्र हो । एक सामुद्री लुटेराको ठूलो जहाज ब्ल्याक पर्लको क्याप्टेन बन्ने रहरबाट जालझेल इच्छा आदि वरिपरि बनेको पहिलो फिल्मका थुप्रै भाग आइसकेका छन् ।
वेलकम : हिन्दी फिल्म ‘वेलकम’को कथा, चरित्र र संवाद सबै असाध्यै मन परेको थियो । जोबाट भागेको हो उसैसँग सहारा माग्न पुग्नुपर्ने गरी घुमेको कथा छ ।
साइनो : प्राय: दुई हिरोइन र एक हिरो भएको त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा एक जना मर्नै पर्ने नेपाली फिल्मको प्रचलित कथा हो । यसमा भने कसैलार्ई मारिएको छैन । यो क्लिसेभन्दा थोरै परको फिल्म हो ।
मारुनी : कथाका दृष्टिले ‘मारुनी’ अब्बल हो । ट्रान्सजेन्डरको विषयमा बनेको यो फिल्म मलाई निकै नै राम्रो लाग्यो । यसमा कथालार्ई अनावश्यक तोडमोड नगरी यथार्थपरक देखाइएको छ ।
डाउनफल : यो फिल्म हिटलरका अन्तिम दिनहरूको बारेमा बनेको छ ।
ट्रयाएंगल : यो प्रयोगात्मक फिल्म हो । कथा भन्ने तरिका पनि नौलो छ । उही घटना उही पात्र स्थितिको अन्त्यपछि पनि दोहोरिराख्छ । यसले दर्शकलाई पटक–पटक झुक्याउँछ ।
स्टोकर : यस फिल्मको मुख्य कन्टेन्ट आमा–अंकल–छोरीबीचको अन्तरंग सम्बन्ध र बदला हो । निर्देशनमा अब्बल यो फिल्म फिल्ममेकरलाई लाभदायी हुन सक्छ ।
भ्यान्टेज पोइन्ट : एउटा खुला समारोहमा कडा सुरक्षाबीच राष्ट्रपतिको हत्या भएपछि के हुन्छ ? त्यसै हत्याको अनुसन्धान त्रिकोणात्मक हुन्छ । अनुसन्धान विधिले दर्शकलाई रमाइलो अनुभूति गराउँछ ।
अन्धाधुन : यस वर्ष उत्कृष्ट फिल्मको राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको बलिउड फिल्म ‘अन्धाधुन’मा दृष्टिविहीनको अभिनय गरिरहेको युवक अचानक एउटा हत्याको साक्षी बन्न पुग्छ । कसरी त्यो हत्या उजागर गर्ने भन्ने सोच्दासोच्दै हत्याराहरूबाट साँच्चिकै दृष्टिविहीन बनाइन्छ ।
किंग्सम्यान : एउटा अन्डरकभर जासुसी संस्थाले केही नयाँ युवालाई विभिन्न मिसनका लागि भर्ती गर्छ र तालिम दिएर मिसनहरूमा पठाउँछ । फिल्म कथा, निर्देशन, पटकथा सबै आधारमा अब्बल छ ।
द गुड द ब्याड द अग्ली : वेस्टर्न जनरामा यो निकै राम्रो फिल्म हो । पैसाको लागि राज्यले घोषणा गरेका फरार अपराधी खोज्न तीन वयस्क लडाकुहरूको यात्रा र विभिन्न उतारचढावबारेको कथा यस फिल्ममा रहेको छ । खासगरी यसको जिंगल म्युजिक प्रसिद्ध मानिन्छ ।